Ụlọ ọrụ ọgwụgwọ Wellhead |Ndị na-emepụta ọgwụgwọ China Wellhead, ndị na-eweta
Ntugharị kristal na evaporation
Ọgwụgwọ Ọdụ Gas
Ngalaba mgbake NGL
Ụlọ ọrụ LNG Liquefaction
Ngalaba mmepụta hydrogen
Arụmọrụ ụlọ ọrụ
Omenala 50 ruo 100 MMSCFD 3 usoro ule na separqator
Ngwa ndị bụ isi bụ ihe nkesa nnwale, valvụ na-achịkwa, nrụgide dị iche iche, ọkwa mmiri mmiri, okpomọkụ, ngwa nha, nnweta data na sistemụ njikwa.
Rongteng 50 MMSCFD Mmanụ & Gas ule na nkewa
Edebere ule mmanụ & gas na Separator Rongteng Mmanụ & Gas Separator iji kewaa nke ọma n'ime ụzọ abụọ ma ọ bụ atọ ma jiri ya mee ihe n'ubi mmanụ na gas.Iji nweta nkewa dị elu nke ọma, a na-emepụta ndị na-ekepụta mmepụta ihe na-atụle ọtụtụ ụkpụrụ, dị ka ike ndọda, coalescing, na ume.HC na-ejikwa usoro kpo oku na-emepụta ihe nkesa mmepụta ihe, na-enye ohere nkewa ka mma n'oge a na-ejikwa crudes dị arọ, na-arụ ọrụ na gburugburu oyi.Nkewa mmanụ & gas...
Mxied mmanụ na gas njem
Ụgbọ njem ngwakọta mmanụ na gas agbakwunyere ka a na-akpọkwa skịd skid dijitalụ ma ọ bụ skid booster.Mmanụ na gas ngwakọta iga skid nwere ike ịghọta na mwekota nke omenala gas-mmiri kpo oku na gas-mmiri ihe nchekwa ọdụ, ime akara nke gas-mmiri nkewa tank, nkewa tank, ime akara usoro, wdg Ọ nwere ike dochie obere mmanụ na gas na-ezukọ. ọdụ na ala permeability oilfield.
Desanụ skid maka sistem mwepụ ájá
The Natural gas wellhead sand separator skid bụ nke a na-ejikarị na eke gas olulu mmiri ma nwalee mmepụta nke ọma ubi nke onshore condensate ubi.Offshore condensate ubi ikpo okwu gas wellhead.
Nkewa mmanụ na gas maka ọgwụgwọ olulu mmiri
N'ime usoro ịsacha gas na mmepụta ihe, ájá na-emekarị na olulu mmiri gas.Ụmụ irighiri ájá na-asọba n'ime ikpokọta elu na netwọọdụ pipeline ụgbọ njem nwere oke ọsọ nke gas sitere n'okike.Mgbe ntụgharị ntụgharị gas na-agbanwe, mmegharị ọsọ ọsọ nke ihe ndị dị n'ájá ga-eme ka mbuze na yikwasị ngwá ọrụ, valves, pipeline, wdg.
Onye na-ebugharị pigging na ihe nnata skid maka sachapụ gas mmanụ
A na-etinyekarị ya na nsọtụ abụọ nke pipeline bụ isi maka ịnyefe na ịnata pigging, a pụkwara iji ya mee ihe maka nhicha wax, ịsa mmanụ na iwepụ ọnụ ọgụgụ tupu na mgbe etinyere pipeline na mmepụta.Dịka ihe ndị ọrụ chọrọ si dị, enwere ike ịhazi skid maka iji ụzọ abụọ.
Atọ ule ule na separator maka mmanụ gas na mmiri
A na-ejikarị mmanụ, gas, nkewa nke atọ nke mmanụ ma ọ bụ ngwaahịa gas, nke na-ekewapụ mmiri na gas, ma na-ekewa mmanụ na mmiri na mmiri mmiri.Mmanụ, gas na mmiri na-aga njikọ na-esote site na pipeline dị iche iche.The atọ-adọ separator bụ ihe eluigwe na ala karịa gas-mmiri mmiri abụọ separator na mmanụ-mmiri abụọ-phase separator.
Ndị ọkachamara na-ahazi nrụgide nrụgide na skid maka ikuku gas
Nrụgide nrụgide na mita skid nke ọdụ LNG mejupụtara valvụ, nzacha, onye na-ahụ maka nrụgide, mita eruba, valvụ mechiri emechi, valvụ nchekwa nchekwa, igwe bromination na ihe ndị ọzọ bụ isi, nke na-enye gas kwụsiri ike na ntụkwasị obi maka mgbada ma dabara adaba. maka nrụgide nrụgide na metering nke nkịtị okpomọkụ gas mgbe gasification na LNG Reserve ọdụ.
Igwe ọkụ jaket mmiri skid maka ọgwụgwọ isi iyi gas
Ngwakọta ikuku gas jikọtara ọnụ bụ akụrụngwa agbakwunyere na nrụpụta gas nke ọma nke na-ejikọ sistemu kemịkalụ, ọkụ jaket mmiri, ihe nkesa, ngwaọrụ ikuku gas, igwe na-eje ozi, ngwaọrụ na-ebugharị orifice, onye na-ebugharị, na-achịkwa ikuku gas, sistemu nlekota corrosion na valvụ, ọkpọkọ na akụrụngwa zuru oke.
Ụlọ ọrụ nhazi gas ahaziri iche (RMS)
Emebere RMS iji belata nrụgide nke gas sitere na nrụgide dị elu gaa na nrụgide dị ala, wee gbakọọ ole ikuku gas na-agafe na ọdụ ụgbọ mmiri.Dịka omume ọkọlọtọ, RMS maka ọdụ ọkụ ikuku na-enwekarị ntụ oyi gas, nhazi na sistemu igwe.
Mmanụ gas mmiri nke atọ nkebi nkewa
Okwu Mmalite Mmanụ gas mmiri nke atọ na-ekewapụta ihe bụ ngwaọrụ maka ikewa mmanụ, gas na mmiri na-emepụta mmiri n'elu ma na-atụle mmepụta ya nke ọma.Kewara n'ime vetikal, kehoraizin, okirikiri atọ ụdị.Maka ịdị mma nke njem, a na-ejikarị ihe nkesa kwụ ọtọ maka nha mmepụta.The esịtidem Ọdịdị nke ahụkarị kehoraizin atọ-phase separator tumadi na-agụnye: mbata diverter, defoamer, coalescer, vortex eliminator, demister, wdg Mmetụta Whe ...
skid inhibitor corrosion inhibitor
A na-akpọ mmiri mmiri na-ejuputa skid dosing na injection skid, odorization skid.ma ọ bụ ihe mgbochi corrosive skid.
Nke 8, Nkebi nke 2 nke okporo ụzọ Tengfei, Subdistrict Shigao, Mpaghara Ọhụrụ Tianfu, obodo Meishan, Sichuan China 620564
Nkà na ụzụ atụmatụ nke Feed gas pretreatment system na Liquefaction na refrigeration usoro na usoro nke LNG osisi
Mgbanwe na-arụ ọrụ nke ngwaọrụ LNG